By ibrahim Aden shire September 06, 2017
Waxaan isku dayay inaan fahmo qaladaadka ku jiro qoraalada BBC-da. Waxa kaliya ee isoo baxay dadkuna ku haysteen waa inay ku qoraan lahjadda looga hadlo meelaha ay kasoo jeedaan oo aysan isticmaalin erayo iyo xarfo kuwa buuqayo deegaankooda looga hadlo.
Arintaas waxaan u arkay xad-gudub lagu sameeyay shaqaalaha BBC-da iyo kuwa la mid ah ee lahjadooda wax ku qoro waayo ma jirto wax ku qasbayo inay qoraan mid aysan aqoon. Tusaale, haddii aan isticmaalo weedha “xaad sheegtay” markaan hadlayo kuma qasbani inaan qoro “maxaad sheegtay” markaan qorayo. Sababtu waa inay yihiin labo eray oo afsoomaali ah, dad soomaaliyeed oo dhulka iyo afka u simanna ku hadlaan. Sidaa darteed kaada tuur keygaa ka fiicane waaa midaan ha haboonayn.
Ma jirtaa lahjad lagu heshiiyay in af-soomaliga lagu qoro?
Waxaan kusoo koobaayaa inaan aqbalno inay lahjadaheenu kala duwan yihiin waxay ka mid tahay il-baxnimada. Soomaliga Gaarisa dagan iyo midka Garawe ku nool waa u siman yihiin afka iyagoo kala lahjad duwan. Inaan isku tixgalinno waxa aan ku kala duwanahay oo ama dhaqan ah ama lahjad ahna waa midda kaliya ee wada noolaasho iyo nabad aan ku gaari karno. Inta uu jiro damac ah sad-bursi iyo anigaa dadka ugu fiicane sidaan u qufoco u quffac dib u dhac iyo dagaal aan dhamaad lahayn ayaan ku jiraynaa.